खोटाङका स्थानीय तहलाई कहाँ कति बजेट आयो ? (हेर्नुहोस् विवरणसहित) - Nepal's Online News
खोटाङका स्थानीय तहलाई कहाँ कति बजेट आयो ? (हेर्नुहोस् विवरणसहित)
प्रभाव न्यूज डटकम संवाददाता, खोटाङ – खोटाङका १० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि साँढे २ अर्बभन्दा बढि अनुदान प्राप्त गरेको छ । नेपाल सरकारले बुधबार सार्वजनिक गरेको बजेट भाषण अनुशार दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले अनुमानित २ अर्ब ५६ करोड ५५ लाख केन्द्रीय अनुदान पाएको हो । सरकारको बजेट अनुशार सबैभन्दा बढि अनुदान दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र सबैभन्दा कम साकेला गाउँपालिकाले प्राप्त गरेको १ नम्बर प्रदेशकी सभाषद उषाकला राईले बताईन् ।